Ndị na -emepụta ngwaahịa | China Products Factory & Suppliers
Onye na -emepụta ose na -egwe kọfị kọfị na -egwe ihe seramiiki na -egweri isi
A na -eji ihe na -adịghị ahụkebe seramiiki seramiiki eme alumina nke na -agbaze na okpomọkụ karịa 1300 Celsius. Njirimara pụrụ iche nke ihe ndị ahụ na -eme cores na -egweri seramiiki nwere njiri mara nke ike siri ike, na -eyi mgbochi, mgbaze ọkụ ngwa ngwa, nguzogide corrosion, nchekwa na nchedo gburugburu ebe obibi, zuru oke maka ntụpọ nke rọba ma ọ bụ igwe na -egweri ọla.
N'ahịa ahịa ebe obibi US nke nwere ọnụ ahịa ahịa ruru ijeri 14, ihe karịrị 90% na-eji ntụ kọfị emebere ala. Ọtụtụ ndị nwere ajụjụ. Kedu ihe kpatara ị ga -azụta igwe nri kọfị ma ọ bụrụ na ị nwere ike zụta ntụ ntụ kọfị ozugbo? Ọ bụrụ na ị nwere igwe kọfị n'ụlọ, dị ka ọnụ ọgụgụ si kwuo, ọ nwere ike bụrụ ụdị kọfị kọfị. Mmetụta nke ihe igwe nri a dị ntakịrị mma karịa ịzọpịa akpa kọfị.
Igwe anaghị agba nchara na -agbanwe agbanwe akwụkwọ ntuziaka kọfị kọfị
Ogo igwu ihe na kọfị ga -emetụta mpaghara kọntaktị n'etiti kọfị na mmiri yana oge iwepụ kọfị.